Na soo wargeli haddii aad cinwaanka bedelato | CGVS
Na soo wargeli haddii aad cinwaanka bedelato
Inta lagu guda jiro habsocodka magangelyada, waa inaad cinwaankaaga cusub/goobta aad degantahay u gudbisaa CGRS iyo Xafiiska Socdaalka. Sidaas, waad hubtaa inaad helayso dhammaan waraaqaha sida casuumaada wareysiga iyo go'aankaaga.
Daabac, buuxi oo ku dir foomkaan boostada diiwaangashan:
CGRS -Rue Ernest Blerot 39, 1070 BRUSSELS (qeybta kore)
IO – Avenue Pacheco 44, 1000 BRUSSELS (qeybta hoose)
Haddii aad sii joogto xarun soo dhaweyn, xubin ka tirsan shaqaalaha xarunta ayaa sidaan samayn doona. Haddii aad joogto cinwaan gaar loo leeyahay, waa inaad adigu sidaas sameysaa. Waxaad ku soo diri kartaa warqad diiwaangashan xafiiska boostada.
Haddii lacala meesha aad u dooratay in cinwaankaga deganaansho uu yahay'CGRS', waxaad soo wici kartaa CGVS si aad u waydiiso in ay boosto kuu taalo iyo in kale (Tusaale ahaan sida warqada casuumaada ee DVZ ama go'aankaagu uu yimid). Waxaad ku sameynsan kartaa tani hab taleefoon ahaan ah 02 / 205.53.05 ama Emayl (cgra-cgvs.advocate@ibz.fgov.be). Sidoo kale waxaad qabsan kartaa balan si aad warqadaada adiga u qaadato.